Uzifunda njani iincwadi kwifowuni ye-Android
Ifowuni yakho ye-Android iza ne-Google's e-book reader app. Inegama elinobuqili lokudlala Iincwadi, kwaye inokufumaneka kwi-drawer yeapps okanye mhlawumbi kwiscreen seKhaya sefowuni.
Qalisa amava akho okufunda ngokuvula i-app ye-Play Books. Ukuba ucelwa ukuba uvule ungqamaniso, cofa iqhosha lokuKhanyisa ukuvumelanisa.
I-app ye-Play Books iququzelela iincwadi kwilayibrari kwaye ibonise ukufundwa, ngokufanayo nendlela eboniswa ngayo kulo mfanekiso ulandelayo.
Uluhlu lwethala leencwadi lidwelise naziphi na izihloko ozifumanele iakhawunti yakho yeencwadi zikaGoogle. Okanye xa ubuyela kwi-Play Books usetyenziso emva kwekhefu, ubona iphepha langoku le-e-ncwadi owawugqibele ukuyifunda. Unokukhetha nayiphi na imo kwidrowa yokuhamba.
Skrolela kwilayibrari ngokuswayipha isikrini.
Chukumisa incwadi kwilayibrari yeapp yencwadi yokuyivula. Ukuba uyivulile incwadi ngaphambili, ubuyiselwe kwiphepha owagqibela ukulifunda. Ngaphandle koko, iphepha lokuqala olibonayo liphepha lokuqala lencwadi.
Ukuqala kokufunda, chukumisa incwadi ukuyivula.
Inani elilandelayo libonisa umsebenzi osisiseko wokufunda iincwadi kwi-app yeeNcwadi zokuDlala. Utyhila amaphepha ngokuswayipha ngasekhohlo okanye ngasekunene, kodwa ubukhulu becala ngasekhohlo. Ungawajika amaphepha ngokuchukumisa icala lasekhohlo okanye lasekunene kwesikrini.
I-app yeencwadi zokudlala nayo isebenza ngokuthe nkqo nkqo, onokuthi ukufumanise kulula ukuyifunda nangona ungazukubona zonke ii icon ezibonisiweyo.
Ukuba awuyiboni incwadi elayibrari, chukumisa i icon yeMenyu kwaye ukhethe uQalela ngokutsha umyalelo.
Ukuqinisekisa ukuba imathiriyeli yokufunda yakho ihlala ifumaneka, chukumisa i-Action Overflow icon kwiqweqwe lencwadi kwaye ukhethe i-Gcina kwisixhobo somyalelo. Ngale ndlela, ifowuni ayifuni unxibelelwano lwe-Intanethi ukuvumelanisa nokukhuphela iincwadi kwithala leencwadi.
Ukususa incwadi kwilayibrari, chukumisa i-icon yokugqashuka kwesenzo kwikhava yencwadi kwaye ukhethe u-Cima kumyalelo weThala leencwadi.
Ukuba ulawulo lwescreen luyanyamalala, chukumisa iscreen ukuze uphinde uzibone.
Inkqubo ye- Ewe icon isetyenziselwa ukunyenyisa umboniso. Ukuchukumisa le icon kubonisa imenyu yeenketho zokulungisa okubhaliweyo kwiscreen kunye nokukhanya.
Ukubuyela kwithala leencwadi, chukumisa i-icon yeapp ye-Play Books kwikona ephezulu ngasekhohlo kwesikrini okanye ucofe i-icon yangasemva.
Ukuvumelanisa kukuvumela ukuba ugcine iikopi zeencwadi zakho zikaGoogle kuzo zonke izixhobo zakho ze-Android nakwifayile ye- iincwadi.google.com iwebhusayithi.
Ukuba unesixhobo sohlobo, unokufumana usetyenziso lweAmazon kwifowuni yakho. Sebenzisa usetyenziso ukufikelela kwiincwadi ozithengele i-Kindle, okanye njengokuncedisa kwiincwadi zikaGoogle.
nini ukuthatha i-fluconazole yesibini
ingaba injani imingxunya kulusu lwayo
zide kangakanani iziphumo ebezingalindelekanga ze-doxycycline
Izibonelelo zempilo zikaNoni